Tabaha Xeeladaha Dhismaha ee Hoosta Ka Xariira oo Si La Yaab Leh U Shaqeeya | Martech Zone
Suuqgeeyayaasha dijitaalka ahi waxay ku tiirsan yihiin dhismaha isku xidhka oo ah istiraatiijiyad muhiim u ah hagaajinta mashiinka raadinta (SEO) si ay u kordhiyaan darajooyinka bogagga ee bogagga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERPs). Iyadoo suuqleyda ay ka shaqeynayaan inay kasbadaan gadaal gadaal iyo inay hagaajiyaan taraafikada goobta, soo saaraan tilmaamo, iyo inay gaaraan ujeedooyin kale, waxay barteen inay u jeestaan ​​dhowr habab oo caan ah sanduuqooda.
Waa maxay Xiriirinta dhabarka?
Xidhiidhka gadaal ee gadaal waa iskuxiraha la riixi karo ee ka socda hal bog oo u gaar ah. Mashiinnada raadinta sida Google waxay u isticmaalaan backlinks gudahood algorithm darajadooda. Inta badan boggaga ku habboon ee isku xira waxyaabaha ku jira, ayaa mashiinnada raadinta ee caanka ah ay rumeysan yihiin inay yihiin. Natiija ahaan, waxay ku soo bandhigi doonaan iyaga sare bogagga natiijada mashiinka raadinta (SERPs).
Waa maxay iskuxirka dhismaha?
Iskuxirka dhismuhu waa geedi socod ay falanqeeyayaasha mashiinka raadintu ay u eegaan gadaasha dambe ee boggaga la xiriira iyo kuwa la tartamaya, ayna go'aamiyaan istiraatiijiyad ay ku isku dayaan inay ku kasbadaan xiriirin ka socota goobta bartilmaameedka oo ay dib ugu noqdaan midkooda. Iyada oo dadaal ku filan, iyo gadaal xiriir la leh, websaydhku wuxuu kordhin karaa darajadiisa shuruudaha gaarka ah iyo muuqaalka guud ee mashiinka raadinta ee boggiisa. Waxaa muhiim ah in la ogaado in isku xirnaanta xiriirinta ka imanaya furitaanka, spammy, ama bogagga aan khuseynin ay hoos u dhigi karaan darajadaada - sidaas darteed dhismaha isku xidhka waa inuu diirada saaraa goobaha aadka u khuseeya, ee tayada sare leh.
Waa maxay Hababka Dhismaha Xiriirintu?
Iskuxir qaababka dhismaha sida dhajinta martida (halka asalka asalka ah loogu abuuray hogaaminta fikirka bog kale oo warshadaha dhexdooda ah), dhisme iskuxira jaban (bedelida backlinks dhintay oo leh waxyaabo kafiican), iyo dhismayaal dhaadheer tayada backlinks) waxay noqdeen waxqabadyada go-to ee warshadaha waxtarkooda sare.
Si kastaba ha noqotee, maaddaama suuq-geynta dijitaalka ahi uu sii kordhayo, milkiileyaal badan oo degello leh iyo milkiileyaasha websaydhadu waxay billaabayaan inay ku fatahaan isla codsiyadaas, iyagoo yareynaya fursadaha codsiyadaada si loo aqbalo. Si loo sii joogo ka hor tartanka, waxaa laga yaabaa in la joogo waqtigii la baadhi lahaa si aan macquul ahayn isku xirka taatikada dhismaha (FIIRO GAAR AH: Taasi waa gadaal gadaal!) Kuwaas oo si fiican u shaqeynaya-ama laga yaabee inay ka fiican yihiin-marka loo eego dhiggooda caanka ah.
Xogta hoos ku xusan (FIIRO GAAR AH: Sidoo kale, istiraatiijiyad dhisid iskuxir!) Waxay wadaagaan tabo yar-yar oo la isticmaalay: wareysiyo, bogag macluumaad, xiriiriyeyaal lamaane, Ka caawi wariye ka baxsan (HARO), dib u soo celinta muuqaalka, xiriiriyeyaasha astaanta, isku xirka / ego bait, dhismaha isku xirka heerka 2-aad, iyo dhacdooyinka warbaahinta.
Iyada oo leh bilow bilow ilaa heer dhexdhexaad ah, xeelad kasta waxaa looga hadlayaa iyadoo la raacayo liistada hababka ugu fiican ee kaa caawinaya inaad kasbato backlinks si aad u fudud.
Waxay kuxirantahay baahiyahaaga, waxaad isticmaali kartaa hal ama isku darka qaababkan iskuxirka isku xirka si aad ugu badiso guulahaaga suuq geyn. Waxaad sidoo kale hirgelin kartaa xeeladahan si aad u kabto dhaqankaaga caanka ah ee isku xirka dhismaha, oo kuu oggolaanaya inaad si wanaagsan u gaarto yoolalkaaga.
Inaad horay uga sii socoto xirmada boggaga natiijada mashiinka raadinta (SERPs) waxay noqon kartaa caqabad, laakiin qaababka iyo istaraatiijiyadaha saxda ah, waxaad hubtaa inaad soo bandhigto natiijooyin wax ku ool ah oo waxtar leh. La imaanshaha qorshe sida ugu habboon ugu habboon baahiyahaaga waa arrin la isku dayo waxyaabo cusub oo la arko waxa sida ugu fiican u shaqeeya. Ka faa'iideyso fursadda aad ku abuuri karto istiraatiijiyooyin iskuxireedkaaga adigoo adeegsanaya qaababka hoose.
Tags: backlinksistaraatiijiyada contentego sedcaawi weriye dibeddasida loodib u soo celinta sawirkaisku xirka dhismahaxiriiriyeyaasha lammaanahaq & asu'aalaha iyo jawaabahadhismaha isku xirka heerka labaadspiralytics
Oscar waa Xayawaanka ' xikmad badan Khabiirka PR ee khadka tooska ah. Xirfadihiisii ​​dhisida ee xiriirka wanaagsanaa waxaa soo diyaariyey sannado badan oo waayo-aragnimo ah oo ka caawinaya shirkadaha dhammaan noocyada kala duwan ee warshadaha si ay u maareeyaan muuqaalkooda astaanta. Ninkani wuxuu cunaa wacyigalin istiraatiiji ah quraacda!
Sida loo Abuuro Xayeysiiska Fiidiyowga ee 'Instagram' oo adigu aad ku hesho natiijooyin